Twin Seoul sigaba kwisigaba sesithathu njenge "nkinga 'yi
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Twin Seoul sigaba kwisigaba sesithathu njenge "nkinga 'yi
izangoma wokwenene [3500 yen yovavanyo lwentsebenzo Free] ukufumana indlela kwintlanganiso
amawele Seoul, umphefumlo uya ukunyathela phezu amanqanaba ezisixhenxe njengoko hlengiso lokugqibela ukuze abe mnye. Lidlala kuhlangana ezothusayo kwinqanaba lokuqala, kodwa uya kufumana ngenyhek yokomoya, yaye uba sesibini isigaba ezibanjiswe amava kunye nolwazi olufunyenwe ngomhla-namhla, ukuba sele isetyenziswe omnye komnye, ummangali ngu ego ezifunyenwe yi imprinting okanye ndicinga ixhala okanye kwamathandabuzo.
kunye kwinqanaba elilandelayo linqanam wesithathu. Kwesi sigaba, walahla ukuzazisa ukuba senziwe ukuya kutsho ngoku, ukuba unako ukwenza ukushiya umphefumlo umdla nganye elinye i isitshixo. Noko ke, abo baye ayenza yamibi yi elidlulileyo amava uthando, ukuba bashiye ukuzigwagwisa sasilinywa ngamava kukuba kuyoyikisa kakhulu, kuya kuba nzima.
Ngoko ke, kuya kuba buhlungu ukuba akukho zilahlwe ngokupheleleyo ego omnye komnye. Oku kwakhona uvavanyo eye zamiselwa ukuze umphefumlo ube mnye nangokomoya qwa ngokupheleleyo, amawele ngokwenene Seoul kufuneka boyise le ntlungu kukuba asinako abe mnye.
kwesi sigaba sikhatshwa intlungu enkulu, kodwa uya kuhamba indlela besilwa kwindawo ukuzigwagwisa. Ubanjwe ingqikelelo uthando
kwisigaba sesithathu yokungqubana ke uyathuthunjelwa uthando
? ezidlulileyo kwemiqathango ukuba kwenzeka nomphefumlo ngamawele, ngenxa elidlulileyo uthando amava yabo, nto leyo iye lesibini kwinqanaba ixhala, emva uyathandabuza ukuya kwelinye iqela, uya kundikhanyela elinye iqela abakwazi ukumelana ukubandezeleka. Ukuza kuthi ga thando abalwamkelanga uthando komphefumlo ngamawele, kuba abo kwi-ezibekiweyo kwezinye iimeko omnye komnye, kodwa inokukhokelela ukuba siphephe elinye iqela ngokuthi ukuzithethelela le meko.
Kodwa, endaweni yokuba uthando olunemiqathango odlulileyo kwisigaba sesithathu, oko amanyathelo isaziso ukuthanda iqabane izinikele. Ngoko ke, waba njani kwixesha elidlulileyo, ingqikelelo uthando ezilahlwayo olunemiqathango Nokuba Terra kubalulekile.
iingqiqo eziphuhliswe ekufundisweni
odlulileyo uthando amava
? ixhala kunye nabo babanjwa uyathandabuza zingqubane kwelinye icala, oko akuthethi ukuba lula zilahlwe. Anxiety and kwamathandabuzo ukuba ivela kulo mbono, kwinqanaba wesithathu uya kuba zikhula ngokukhula. Emva koko, ukugcina ayisendim Ukuzinza uvakalelo, kuya kuba sisebenzisane kwaye amaxesha amaninzi zingqubane.
nangona kunjalo yimeko buhlungu, kusekho abantu ababini umdla kwezinye ngamandla uya kuqhubeka ubaqhubela. Ngamanye amazwi, ukuze ukuhlangana ngexesha ubambe i ukubandezeleka okukhulu olubangelwa ixhala no kutwishika, ayithethi kundisindisa ukubandezeleka.
umphefumlo iwele ngokusebenzisa eli nqanaba kwi
kwinqanaba wesithathu ukwahlulwa kweqonga, kuya kumiselwa kwimbandezelo enkulu. Ukuba ukuba wayesazi ego ngayo kude kube ngoku, kuya kuphuhliswa abangquzulana umphefumlo amawele ukulwa enkulu. Elandelayo kwesi sigaba, ukwahlulwa eqongeni ukulinda.
Noko ke, anikane ukuphucula omnye emva yokwahlukana, ukuba uyazi into yokuba kukho nayo iyafuneka ukuze ulahle kude ukuzigwagwisa, singakwazi ngasekupheleni kweqonga. Indlela ekunokuba ukumelana eli xesha kubalulekile.
Esandeni, oko kuya kumiselwa kwimbandezelo enkulu. Ukuba ukuba wayesazi ego ngayo kude kube ngoku, kuya kuphuhliswa abangquzulana umphefumlo amawele ukulwa enkulu. Elandelayo kwesi sigaba, ukwahlulwa eqongeni ukulinda.